Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Eddie Nketiah Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Anyị Eddie Nketiah Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, ,gbọala, Ezigbo ndụ na Ndụ Onwe.
Na nkenke, nke a bụ akụkọ njem ndụ onye Striker, site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji mee ka agụụ akụkọ ndụ gị nwee agụụ, ebe a bụ ebe ọ nọ na gallery nke okenye - nchịkọta zuru oke nke Eddie Nketiah's Bio.
Lee, mbido ndụ na mbilite nke Eddie Nketiah.
Ee, mụ na gị maara Eddie maka nke ya ụdị egwuregwu; ije ije, ije na ike gwụchara, otu nke mere ka ndị fan jiri ya tụnyere onye bụbu onye egwu Arsenal Ian Wright (onye nkụzi ya).
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụgharị egwu ịtụle ụdị nke Eddie Nketiah's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Eddie Nketiah Nwatakiri Akụkọ nke:
Eddie Nketiah Nwatakiri Foto
N'ihi na Biography EBIDO, ezigbo aha ya bụ “Edward". Eddie Keddar Nketiah a mụrụ na 30th nke May 1999 na ndị nne na nna Ghan na London Borough nke Lewisham, United Kingdom. A mụrụ ya naanị nwa nwoke (nwa ikpeazụ) nke ezinụlọ ya ma nwee ụmụnne nwanyị abụọ buru ibu.
Eddie nọrọ ndụ nwata ya na ndịda ọwụwa anyanwụ London nke ụlọ ndị egwuregwu ibe ya; Igwe Igwe Ntughari Ruben na Wright ezinụlọ (Ian na Shaun Wright-Phillips- mmụọ ọjọọ ọsọ).
Nke ka mkpa bụ na ebe ezinụlọ Eddie Nketiah biri (Lewisham) bụ ụlọ onye bekee na-agụ abụ na Bekee, Natasha Bedingfield.
Dịka ọtụtụ ndị bi n'obodo ahụ (Lewisham), Little Eddie mgbe ọ bụ nwata, nwere uru nke ịghara ịga n'elu ime obodo maka echiche na-akpali akpali nke mbara igwe London.
Foto dị n'okpuru, obodo Ugwu Telegraph lekọtara nsogbu ya.
Onye Bekee na-etolite etolite na Lewisham mgbe ọ bụ nwata. Ebe E Si Nweta: Instagram
Eddie Nketiah Ezin’ulo Ezinne:
N'ịtụle n'ọdịdị ya, ị ga-ekwenye na anyị na mgbọrọgwụ ezinụlọ Eddie Nketiah yikarịrị ka ọ ga-esite na Africa.
Eziokwu bụ, onye bekee na-eti ihe bụ onye Ghana na West Africa sitere na ezinaụlọ na ihe nketa. N'ezie, nne na nna Eddie Nketiah abụọ (nke dị n'okpuru ebe a) bụ ndị Ghanians.
Zute nne na nna Eddie Nketiah bụ ndị ezinụlọ ha sitere na Ghana (West Africa).
Eddie Nketiah Biography - Afọ ndị mbụ tupu Football:
Eddie onye bụ ọdụdụ nwa n’ezinaụlọ ya nwere nnukwu ọpụrụiche sitere n’aka nne na nna ya na ụmụnne ya ndị nwanyị okenye.
Dị ka nwa nke ụlọ ahụ, ọ dị mgbe ọ bụla onye ga - enyere ya aka ime ihe omume ụlọ akwụkwọ ya. Nke kachasị mkpa, enwere nnwere onwe maka ya ikpebi ọdịnihu ya mgbe ọ dị obere.
N'ebe ezin'ulo ya, nne na nna Eddie Nketiah (ọkachasi nna ya) kwadoro ya ka ya na ndị enyi ya gbaa bọl na London Bọọlụ na-amasị South-East.
N'ikwu okwu banyere ahụmịhe mbụ ya na football, Eddie kwuru ihe ndị a mgbe a jụrụ ya GafferONLINE banyere onye webatara ya n’egwuregwu bọọlụ. N’okwu ya;
“Ọ bụ papa m. Ọ bụ ya malitere soro m gbaa bọọlụ gburugburu m n'ụlọ m na n'ogige ezinụlọ m. Mgbe ahụ, m gụsịrị akwụkwọ na nke ahụ wee bido soro ndị enyi m na-egwuri egwu ”.
Egwuregwu bọọlụ na-eto eto nwere egwuregwu asọmpi kachasị n'etiti ụmụaka London na ụmụ nwoke ndị Northern.Akụkọ Gaffer).
dị nnọọ ka Jadon Sancho, Josh Koroma na Reiss Nelson, Eddie keere òkè na egwuregwu bọọlụ asọmpi London maka ụmụaka.
Ingsọpụrụ aghụghọ ya n'okporo ụzọ Lewisham site na asọmpi mechara kwụchaa ụgwọ ọrụ ya dịka o dugara na obere Eddie ịbụ onye nkuzi Chelsea FC gụchara.
Eddie Nketiah Childhood Akụkọ - Ndụ Mmalite Ndụ:
Kpamkpam na afọ 2008, ọ theụ nke ndị ezinaụlọ Eddie Nketiah amaghi oke oge oge nke ha gafere ule agụmakwụkwọ Chelsea wee debanye aha ha n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ.
Mgbe ọ nọ na Chelsea FC Academy, Eddie na-egwuri egwu n'akụkụ kpakpando agụmakwụkwọ dịka Nkume Mason na Callum Hudson-Odoi. (Oh! ị 'amaghị nke ahụ ?? !!).
Ejiri ụdị ọkpụkpọ ya tụnyere nke Jermain Defoe, n'ihi ngaghari ya na ikike ya site na nkuku niile. Ọ bụ ezie na ihe niile yiri ka ọ na-aga nke ọma, Eddie amachaghị na ụfọdụ MAKA DARK na-abịa n'ụzọ ya.
Eddie Nketiah Biography- Difzọ siri Ike tobụ Maara Aha Akụkọ:
Ọjụjụ Mahadum Chelsea:
N'oge nke Didier Drogba, ha bụ akụkọ banyere nnukwu atụmanya ndị e debere na ụmụaka Chelsea.
Dịkwa ka ị nụrụ, a na-atụfu ọtụtụ n'ime ha na mbinye ego mgbe ụjọ na-atụ na ha agaghị eme ya na otu egwuregwu mbụ. N'okwu Eddie Nketiah, nnukwu nsogbu bụ nkatọ mgbe niile maka ọnụnọ anụ ahụ ya dị ka onye ọkpọ.
N'ụzọ dị mwute, nwa agbọghọ na-eto eto n'egwuregwu bọọlụ dịka ụfọdụ n'ime ndị ọlụlụ agụmakwụkwọ ya dabara na jụrụ agụmakwụkwọ. E zigaghị Eddie na mbinye ego MA bụ onye Chelsea jụrụ ma wepụta ya n'afọ 2015.
Ndị mụrụ Eddie Nketiah, ndị ezinụlọ ya na ezi ndị enyi kasiri ya obi n’oge nsogbu ya.
N'eziokwu, achild Nwa nke biri site na ịjụ agụmakwụkwọ ga-ama nke ọma ihe mgbu nke mmụọ na-emebi mmụọ nke ọ nwere ike inwe.
Mgbu nke ịjụ bụ akụkụ dị mkpa nke akụkọ ndụ Eddie Nketiah, nke ọ na-agaghị echezọ ngwa ngwa.
Eddie Nketiah Biography - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
N'ịghọta ọchịchọ nwa ha nwoke nwere ịgba bọọlụ maka ndụ ya, ndị ezi na ụlọ Eddie Nketiah, ọkachasị nna ya, mere ihe niile o nwere ike ime iji nwetaghachi ya n'egwuregwu bọọlụ ọzọ.
Dị ka chi ga-enweta ya, Arsenal FC buliri nwata ahụ ma nye ya ohere ịgụ akwụkwọ bọọlụ ka izu abụọ gachara mgbe Chelsea jụrụ ya.
Kemgbe ọ banyere Arsenal, Eddie elebeghị anya azụ, ebe ọ malitere ịmasị ndị nkuzi ya. O gosipụtara mmụba dị egwu na àgwà siri ike, nke wetara àgwà dị ukwuu n'ime ya na ọchịchọ nke akara.
Banyere ịrị elu ya, nke mbụ, nwata ahụ nyeere ndị otu aka aka inweta asọpụrụ bọọlụ ọkachamara mbụ ya- Otu egwuregwu Premier League 2.
Eddie gbaghaara Arsenal ozugbo ozugbo ụlọ akwụkwọ Chelsea FC jụrụ ya. Ebe E Si Nweta: Instagram
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ Arsenal, Eddie malitere iso ụlọ ọrụ ahụ nwee ọganihu meteoric.
Ihe ọzọ gbara ọkpụrụkpụ na ọrụ ịrị elu Eddie Nketiah bịara na 2018, afọ o nyeere ndị otu England U21 ibe ya aka ka ha merie ama ahụ. Toulon Toulon.
N’oge a, Eddie chere ihe atọ n’uche ya. Nke mbụ bụ na ya “Oge ndi Ntorobịa rụzuru".
Nke abụọ bụ na ya “Ejirila egwuregwu bọọlụ", Na nke atọ bụ mmetụta na" yaE nyefewo akara aka akụkụ".
Ndị ama ama n'etiti ndị buliri iko a gụnyere; Hamza Choudhury, Kyle Walker-Peters, Egwuregwu Tomori, Tammy Abraham na Tom Davies.
Imeri asọmpi Toulon nke 2018 pụtara ihe niile maka Eddie. Ebe E Si Nweta: Twitter
N'oge a na-ede akụkọ ndụ Eddie Nketiah, a na-ahụta ya ugbu a dị ka onye na-aga n'ihu n'oge a, onye na-emezu ugbu a ọkaibe bọọlụ. Ndị ọzọ, dịka ha na-ekwu, bụ akụkọ ugbu a.
Onye bu Nwanyi Eddie Nketiah?… O nwere nwunye ma obu Nwa?
Site na ihe ịga nke ọma niile ọ mere mgbe ọ dị obere, o doro anya na ọtụtụ ndị Bekee na ndị Arsenal ga-abụrịrị na ha tụgharịrị uche onye enyi nwanyị Eddie Nketiah nwere ike ịbụ.
Dika ozo, ma odi n'ihu di na nwunye, (inwe nwunye? ma ọ bụ nwa?). Ee!, E nweghi agọnahụ eziokwu ahụ bụ na ịma mma Eddie (nwa ya chere ihu + n’ezi egbugbere ọnụ) agaghị eme ka ọ bụrụ A-Lister maka inwe ndị enyi nwanyị na ihe onwunwe nwunye Britain / Africa.
Ọtụtụ ndị fans ajụọla… Onye bụ Nwanyị Eddie Nketiah? Ebe E Si Nweta: Instagram
Mgbe awa ole na ole nyocha siri ike na weebụ, anyị amatala na onye ọkpọ ahụ emeghị ka mmekọrịta ya na gọọmentị (ọha na eze) n'oge ederede.
Ugbu a, akaụntụ Eddie Nketiah soshal midia (Instagram, Facebook, Twitter) egosighi itinye aka ya na onye ọ bụla. MA, o nwere ike ịbụ na ọ na-akpa na nzuzo na onye someoneonye ma?…
Eddie Nketiah Web (Big Car):
Mata nke Eddie Nketiah's Otú e si ebi ndụ ga-enyere gị aka ịmata otú o si ebi ndụ.
Ọ bụrụ na ịmaghị (ikekwe n'ihi na ị siri na Mars rida), Eddie bụ onye maara n'ezie etu esi etinye ego ịkwụ ụgwọ ya ruru £ 16,426 kwa izu ka ọ baara uru. Lelee nkwọcha nracha ya !!.
Nke a bụ ụgbọ ala Eddie Nketiah
Na ndụ Eddie Nketiah, nwa nwoke Bekee enweghị nsogbu ịhapụ ụwa ka ọ hụ akụkụ nke ndụ ya. Dabere na GafferOnline, Eddie kwuru n'otu oge na ọ na-acha ọkụ ma ọ naghị egosi nke ukwuu. N'okwu ya;
“Ọ ga-amasị m ịsị na ekwenyeghị m nke ọma, Ma, anaghị m enwu enwu. Naanị m na-achọ ijide ihe na jụụ.
M n'ime uwe m massively, mgbe niile na-achọ n'ime ọhụrụ ụdị, Gi i like to stuffs mma and understated. ”
Ndụ nke Eddie Nketiah:
Ọnye na-bụ Eddie Nketiah?… Gịnị na-eme ya Akọrọ?…. Na-amalite, ọ bụ onye na-enwe mmetụta nke ọma na ụdị nke ọ na-egosipụta ma nwee echiche nke ịdị mma (dị ka onye ntorobịa London).
Eddie bụ onye na-achọsi ike maka uto nke onwe ya, ma na ma na nkwụsị.
Na ndụ nke Eddie Nketiah, ọ na-asọpụrụ onye ọ bụla ọ hụrụ ụbọchị niile, na-achọsi ike banyere uto ma dị njikere ịmụtakwu ntakịrị banyere ụwa gbara ya gburugburu.
Eddie Nketiah's Personal Life. Ọ hụrụ mmụta banyere ụwa gbara ya gburugburu yana yana onye nkuzi ya nwee ọ funụ. Ebe E Si Nweta: IG
Maka Eddie, igwu egwuregwu kọmputa na idere arụsị ya bụcha akara ngosi nke ndụ ọ happyụ.
Na agbanyeghị football, ọ na - etinye oge dị mma na ama ama ama ama ama ama na Arsenal- Ian Wright. Ewezuga akụkọ ifo, Eddie mụtakwara ihe na ya Thierry Henry, onye nke ọzọ nke arusi ya. N’okwu ya;
"Mgbe m na-etolite, Ian Wright bụ nwoke m lere anya, ana m abụkarịkwa onye na-akwado Arsenal ọbụlagodi na ọ nọ na Chelsea."
Eddie Nketiah Ndụ Ezinụlọ:
Site na a mụrụ Eddie na England mana o sitere na ezinụlọ Ghana na ihe nketa, ọgụ iji kwado ịkwado ya kwesịrị ịmasị.
N'akụkụ a, anyị ga-atụgharịkwu ìhè na ndị ezi na ụlọ Eddie Nketiah, malite na nne na nna ya.
More banyere nna Eddie Nketiah:
Nnukwu nna bụ isi okwu mbụ mgbe ọ bụla ihe na-adabaghị maka nwa ikpeazụ ọ hụrụ n'anya.
Kemgbe ọtụtụ afọ, nna Eddie Nketiah akụnyewo ụkpụrụ n'ime ya, nke metụtala ụzọ o si ele ndụ anya.
Eddie kwuru otu oge GafferOnline, na omume ndidi na ihe omuma banyere ijikwa ihe ndọghachi azụ sitere na nna ya nwere ahụmahụ.
More banyere Eddie Nketiah's Mama:
Nnukwu nne emeela nnukwu nwa nwoke, nne nne Eddie Nketiah abụghị onye ọzọ. N'ịbụ nwa nwoke na nwa ikpeazụ nke ezinụlọ Nketiah, Eddie kwuru otu oge na mama ya na-enweta ọgwụgwọ pụrụ iche.
Nke a bụ ọnụahịa ya maka ịbụ kaadị ikpeazụ ya na nwa nke ụlọ ahụ. Nne Eddie Nketiah bụ maka ezi nwa ya nwoke, nke o kwuru emetụtara echiche ya banyere ndụ.
More banyere ụmụnne nwanyị Eddie Nketiah:
Dabere na GafferOnline, Eddie kwuru otu oge na inwe ezinụlọ nwere ọmarịcha ụmụnne nwanyị na - eme ka ezinụlọ ya bụrụ “Ibe mara".
Ee! dị ka nwa ikpeazụ a mụrụ, ụmụnne ya ndị nwanyị na-elekọta ya gburugburu, n'ezie, Eddie nwere mmasị na ya ma kwuo na ọ ka nọ na-achịkwa ya (Akụkọ GafferOnline).
Ka o sina dị, ụmụnne nwanyị abụọ nke Eddie Nketiah akwadowo ya mgbe niile, ndị egwuregwu bọọlụ akwụsịghị ikwusi ụgwọ ọ ji ha.
Eziokwu Eddie Nketiah:
N'ezie #1: Ọda Ya Na-akwụ ụgwọ:
Kemgbe ọ malitere, ọtụtụ ndị egwu ajụọla ajụjụ a; Ego ole ka Eddie Nketiah na-akpata?….
N'ime afọ 2017, nkwekọrịta nkwekọrịta ahụ hụrụ ya ka ọ na-etinye ego na-akwụ ụgwọ gburugburu £800.000 kwa afọ. Ihe ijuanya dị n'okpuru ebe a bụ ụgwọ ụgwọ ọnwa ya kwa afọ, ọnwa, ụbọchị, oge, oge na nkeji.
EDDIE NKETIAH ỤGWỌ ỤLỌ
AKA NA-EBUTA N'PLỌ EGO
EGO SALARY EURO (€)
Ihe ọ na-akpata kwa afọ £ 808,155 € 900,000
Ihe ọ na-akpata kwa ọnwa £ 67,346 € 75,000
Ihe ọ na-akpata kwa izu £ 16,426 € 18,293
Ihe ọ na-akpata kwa ụbọchị £ 2,208 € 2,459
Ihe ọ na - akpata kwa elekere £ 92 € 102
Ihe ọ na-akpata na nkeji ọ bụla £ 1.53 € 1.71
Ihe ọ na-akpata na Sekọnd £ 0.03 € 0.03
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Eddie Nketiah'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ị maara?… Nwa nwoke n’etiti UK kwesịrị ịrụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala afọ 2.2 iji kpata £ 67,346, nke bụ ego Eddie Nketiah na - enweta na 1 ọnwa.
Eziokwu nke 2: Banyere ya "Kpọọ m" Ememme Mgbaru Ọsọ:
Mmalite nke Eddie Nketiah's CALL ME Goal Celebration. Ebe E Si Nweta Foto: GafferMagazine na FourFourTwo
Mgbe a gbara ajụjụ ọnụ na GafferOnline, A jụrụ Eddie maka mmemme akara azụmaahịa ya kpọrọ 'akpọ'. N’okwu ya;
“Ememme ịkpọ oku malitere na oge gara aga na Arsenal nke m bịara n’oge na-adịghị anya.
na-eru nso oge ikpeazụ, anyị na-adọta megide Bayern Munich. Na mberede, adụrụ m ezigbo mma ozugbo ma na-emetụ bọọlụ ahụ nke ọma.
Mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, ụlọ ọrụ mgbasa ozi Arsenal tweeted na-ekwu: 'Ọ B IFR YOU na ị chọrọ inwe ihe mgbaru ọsọ. Ọkpọrọ Eddie ka mma !!.'Thedị ememme ahụ si ebe ahụ pụọ.'
Eziokwu nke 3: Okpukpe nke Eddie Nketiah:
N'ikpe ikpe ya n'etiti "Kedar", enwere ike na nne na nna Eddie Nketiah nwere ike ịbụ ndị Alakụba.
Ị maara?… Kedar pụtara “Ike”N’asụsụ Arabik, ọ bụkwa aha Alakụba Alakụba nke enyere nwa nwoke nke Ishmael. Echefula na Kida bụ nwa nwa nke Abraham na Hega.
N'ihi ya, ọ ga-ekwe omume na ndị ezinụlọ Eddie Nketiah bụ ndị Alakụba site n'okpukpe. Ha abụghị ndị otu Kristi dịka ọtụtụ Fans nwere ike iche.
Eziokwu nke 4: Eddie Nketiah Tattoos:
N'ikpeazụ na Eziokwu ya bụ okwu banyere ya na egbugbu. Eziokwu bu, Eddie ekwenyeghi “Ogbugbu Akara“, Isiokwu a na-ewu ewu taa n’ụwa egwuregwu.
Onye na-egbu ihe 5.74ft n'oge ederede adịghị eche na ọ dị mkpa ịnwe ndị ezinaụlọ ya, enyi nwanyị na ụmụaka ya n'ọdịnihu dị ka nka.
Eddie enweghị oge maka Tattoos. Na-ekpe ikpe site na foto a, ọ nwere Ink Ink n'oge edere. Ebe E Si Nweta: IG
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Akwụkwọ Na-aga n'ihu nke wardmụaka Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
EDDIE NKETIAH BIOGRAPHY (Enyocha Wiki)
Aha n'uju: Edward Keddar Nketiah
aha otutu: Eddie
Andbọchị na Ebe Ọmụmụ: 30 nke Mee 1999 na Lewisham, London, United Kingdom.
Age: Afọ 20 (dị ka ọ dị na Febụwarị 2020)
elu: 1.75 m ma ọ bụ 5.74ft
Egwuregwu Music kacha mma 72 kg
Artist ọkacha mmasị: Lil Baby, Gunna na D-Gbochie Europe
Ihe akara Zodiac: Gemini
Religion: Eleghị anya ịbụ onye Muslim n'ihi aha ya middlename "Kedar"
Ọkachamara: Onye na-agba ụkwụ (Central n'ihu)
Bọọlụ Idol: Ian Wright na Thierry Henry
Ndị nne na nna: Mr na Mrs Nketiah
Nwere istersmụnna nwanyị: Ee
Nwere Brothersmụnne: Mba